Man United Oo Si Fudud Ku Heshay Beddelka Jadon Sancho, Chelsea Oo Dhamaystiraysa Heshiiska Havertz, Arsenal Oo Saxeex Cusub Shaacinaysa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Maanta Oo Arbaca Ah - Gool24.Net
Man United Oo Si Fudud Ku Heshay Beddelka Jadon Sancho, Chelsea Oo Dhamaystiraysa Heshiiska Havertz, Arsenal Oo Saxeex Cusub Shaacinaysa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Maanta Oo Arbaca Ah
August 19, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Manchester United waxay aragtay inay suurtogal tahay in laacibka khadka dhexe uga ciyaara Bournemouth ee David Brook oo ah 23 jir u dhashay Welsh uu buuxin karayo booska ay u doonayaan ciyaartoyga madax-xanuunka ay ka qaadeen raadintiisa ee Jadon Sancho. (Sport Witness)
Arsenal waxay rajaynaysaa inay £22 milyan oo Gini ku dhamaystirto heshiiska difaaca Lille ee Gabriel Magalhaes. 22 jirkan reer Brazil ayay raadinayeen kooxo ay ka mid yihiin Man United, Napoli iyo Everton. (ESPN)
Chelsea waxay dhamaystiri doontaa heshiiska kubbad-sameeyaha Bayer Leverkusen ee Kai Havertz oo 21 jir ah tobanka maalmood ee soo socda. Laacibka reer Germany waxa uu doonayaa inuu tago Stamford Bridge, heshiis shan sannadood ahna uu saxeexo. (Bild)
Juventus waxay u isticmaali kartaa Paulo Dybala oo 26 jir ah, inuu qayb ka noqdo heshiis ciyaartoy isweydaarsi ah oo Manchester United ay kaga doonayso Paul Pogba oo 27 jir ah. Laacibka reer Argentine ee Dybala waxa heshiiskiisa Juventus ka hadhsan laba sannadood. (Tuttosport)
Dhinaca kale, Manchester United waxay la socotaa xaaladda 29 jirka reer Brazil ee Douglas Costa. (Sky Sports)
Everton waxay qarka u saaran tahay inay Napoli £27 milyan oo Gini kagala soo wareegtay 29 jirka khadka dhexe ee reer Brazil ee Allan. (Sport Witness)
Watford waxay iska diidday dalab uga yimid Everton oo ka doonaysa laacibka khadka dhexe ee ABdoulaye Doucoure. Hornets waxay ku doonaysaa inay ku iibiso laacibkan £25 milyan oo Gini. (Standard)
Lazio waxay ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Felipe Anderson oo ah 27 jir u ciyaara West Ham, kaddib markii ay ku guul-darraysatay inay lasoo saxeexato ruug-caddaagii Man City ee David Silva oo u wareegay Real Sociedad. (Star)
Difaaca Arsenal ee reer Giriig ee Sokratis oo 32 jir ah, waxa bartilmaameed ka dhigatay kooxda Talyaaniga ah ee Roma oo ka gaws-adaygtay inay bixiso qiimaha Manchester United ay ku xidhay Chris Smalling. (Corriere dello Sport)
Chelsea waxay wada-hadallo kula jirtaa laacibka khadka dhexe ee reer England ee Conor Gallagher oo ay sidoo kale xiisaynayaan Newcastle iyo Crystal Palace. (Mail)
Kabtanka Brighton ee Lewis Dunk oo 28 jir ah iyo difaaca 22 jirka ah ee Ben White, waxay sii joogi doonaan kooxdan. Dunk ayaa lala xidhiidhinayay Chelsea, halka Leeds United ay ku raad-joogtay White. (TalkSport)
Sheffield United waxay doonaysaa inay sannad kale amaah kusii haysato goolhayaha Manchester United ee Dean Henderson oo 23 jir ah, inkasta oo ay Bournemouth kala heshiisay, kana soo qaadanayso goolhaye Aaron Ramsdale oo 22 jir ah. (ESPN)
Goolhayaha labaad ee Manchester United ee Sergio Romero oo 33 jir ah, waxa doonaya kooxaha Leeds, Everton iyo Chelsea. (ESPN)